माओवादीले प्रतिनिधि सभामा पाउने भयो ५६ सांसद, कुन प्रदेशमा कति ? « Naya Bato
माओवादीले प्रतिनिधि सभामा पाउने भयो ५६ सांसद, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधी र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ६० र ४० को अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र वाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको छलफल र गृहकार्य अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधी सभामा ५६ सीट पाउने देखिएको छ ।
केन्द्रमा रहेका कुल १६५ सीट मध्ये वाम गठबन्धनमा आउने अन्य शक्ति र नयाँ शक्तिलाई सीट छुट्याएपछि वाँकी रहेकोबाट एमाले र माओवादीबीच ६० र ४० अनुपातमा सीट वाँडफाँड गर्नै सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार माओवादीले केन्द्रमा ५६ सीट पाउने देखिएको हो ।
सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा दुई-दुई सीट बाँड्ने अनौपचारिक सहमति भएको बुझिएको छ । यद्यपि माओवादीले रौतहटमा पनि तीन सीट दाबी गरेको छ । यहाँ स्थानीय तहको चुनावमा एमाले पराजित भएको थियो ।
प्रदेश ७ मा प्रतिनिधिसभा १६ सीटमध्ये एमाले र माओवादीबीच कतिकति बाँड्ने भन्ने बारेमा कार्यदलमा छलफल भइसकेको छैन । माओवादीले कैलालीमा ५ मध्ये २ र कञ्चनपुरमा ३ मध्ये एक सिट पाउने अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतले बतायो ।